Qosol iyo Qisooyin Hore Qaybtii 3aad W/Q Xareed Saalax Cadaawe | raascasayrmedia.com
← Kulan ay Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xaruntooda Muqdisho oo kusoo gabgaboobay buuq
Nin Dad ku Laayay Wadanka UK oo Wali Laqaban La,yahay →
July 6, 2010 · 7:29 pm
Qosol iyo Qisooyin Hore Qaybtii 3aad W/Q Xareed Saalax Cadaawe
Dagaaalkii 2aad ee aduunku wuxuu saamayn xoogan iyo jahwareer ka dhaliyey Bariga Afrika. Soomaalida waxaa godkeeda biyo ugu galeen, markii quwadihii kala gumaysanayey laftirkoodi is galeen! Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa ka kala tirsanaa labadii garab ee ifka ku dagaalamayey waqtigaas (1939-1945). Midba mar ayuu intuu soomaalida cawaansaday wuxuu ka dhigtay gaashaan uu iska horaysiiyo iyo dabcan lafo geel iyagaa la isku jebiyaa.
1940kii kadib markii uu Talyaanigu ka guulaystay Ethiopia, ayuu inta uu ismahadiyey weerar dharbaaxo kulul leh Ingiriiska ku qaaday oo qaybtii Woqooyi ee Soomaalida uu ka xukumayey kala wareegay (British Somaliland). Waa isaga iyo ku ayaankiise, guushaasi ma noqon mid wax badan sii jirta. Bilowgii 1941kii ayaa Ingiriisku weerar rogaal celin ah ku soo qaaday oo dhammaan dhulkii Soomaalida gacan ku dhigay, marka laga reebo qaybta Jabuuti oo Faransiiska oo ay isku xulafo ahaayeen haystay.
Garabkiisi (Germany, Japan, Austria iyo qaar kale) oo jabay awgeed, Talyaanigi xoog danbe oo Woqooyi Bari iyo Koonfurta Soomaaliya ku soo ceshado awood waa! Balse dhowr sano kadib markii dagaalkii 2aad dhammaaday, ayaa qaar ka mid ah dawladihii reer Yurub, UN-ka iyo xisbiyo siyaasadeed oo Soomaalidu yeelatay(marka laga reebo SYL) waxay maslaxad u arkeen in Talyaaniga dib loogu soo celiyo maamulida saamigii uu Soomaalida horay uga haystay.
Sida la sheego, Ingiriisku kuma qanacsanayn go’aankaas. Wax kasta oo Talyaanigu hortiis dejiyeyna wuxuu ka dhigay jaantaa-rogan. Tabcooyin lagu kufo iyo hagardaamooyin ayuu kasii shaqeeyey.
1949kii ayaa la soo gaaray, Ingiriis inuu hilayadiisa inta uu tuurta saarto oo la luudo mooyee, talo kale uma eka. Maraakiibta dagaalka ee talyaaniguna waxay si saf xiran ah ugu soo caashaqdeen xeebaha Soomaaliya.
Ka bixitaankii Ingiriiska ee xeebaha Woqooyi Bari waxay ahayd hal-haleel. Dhacdo qosol leh waxay ahayd: markii uu Baargaal ka baxayey ayuu koox Soomaali ah oo la shaqayneysey wuxuu uga tegay xoogaa hub ah. Tababar aan buuxina waa siiyey. Sida la igu yiri, hubkaas waxaa ka mid ahaa Qoray culus oo farsamo ahaan liita —- inta fadhi adag loo xiro ayaa dab waxaa lagaga shidaa gadaal , markuu kululaado ayuu dhacaa!
Waa Inoo Dhacatay!!
Malaha, dhowr nin oo caro la duubnaa, oo gumaadkii iyo aramigii Fajiistaha la xanuunsanayey, Ingiriiskana gacal mooday, ayaa hubka gacanta ku dhigay. Cidba talo kama waydiine waxay is tuseen: maraakiibta Talyaaniga ee xeebta soo dhiganaysa la gaada oo duqada kaga dhiga!
Aan Walandeyno : “Hee Walla”
Nimankii qorigii ayay walwaaleen. Meel xeebta ah oo ay dhufays qarsoon u doorteen ayay geeyeen. Waxay la gaadayaan markab meel ku aadan u soo dhowaada, oo ay ku ridaan. Waxay dhursugaanba, goor danbe ayay ula muuqatay inay markan ku macdahay!
Si deg deg ah ayaa xaabo loo soo tuumiyey. Dabkaa la shiday. Talo isuma kaa sheegto e, lagama fekerin xoogga celinaaya qoriga marka uu dhacayo inta uu leegyahay! Si sahlan ayaa waxaa gadaal lagaga xiray xarig Catiir ah. Wax dabka la huriyoba, hal mar ayaa inta qoraygi dhacay, haddana xarigi goostay, oo badda galay! ….. waa la is eeg eegay!
Waxaa laga fekeray ‘mar haddii markabku jigta maqlo, jawaab ayuu soo celinayaa, ee yaan meesha la inna ku layn’. …waliba dhibaatada duqaynta Talyaaniga waayo arag ayaa loo yahay … Nin kasti meel ayuu afka saaray, oo kabaha ka cararay!. Hase ahaatee, in la maqlay iyo in kale mooyee, cidina wax kuma soo ridin.
 Isla qaadis tabar daro ku jirto.
 Qoryo shidaal ah
 Xarig cawda laga sameeyo oo daciif ah
 Kala carar deg deg ah
Halkan ka Akhriso Qaybtii 1aad
Eng.Xareed Salax Cadaawe
One response to “Qosol iyo Qisooyin Hore Qaybtii 3aad W/Q Xareed Saalax Cadaawe”
Pingback: QOSOL IYO QISOOYIN HORE Qaybtii 1aad W/Q Eng.Xareed Saalax Cadaawe « Www.Allcasayr.Com